हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा दुई तिहाई सभासद् पार्न भाजपा नेतादेखि मन्त्रीसम्म सक्रिय – YesKathmandu.com
बिहीबार १७, भदौ २०७२
काठमाडौ, १६ भाद्र । राप्रपा नेपालले संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका सभासद्हरुलाई हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उभ्याउन नेपालभित्र र बाहिरबाट कसरत सुरु भएको छ । हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै राप्रपा नेपालले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाई बहुमत जुटाउन देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरु क्रियासिल भएका छन् ।
संविधानसभाभित्र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा सभासद्हरुलाई पार्न वर्तमान सरकारका मन्त्री, धर्मगुरु र कांग्रेस नेताहरु सक्रिय भएका छन् । कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सभासद्हरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरुलाई उनीहरुले ब्यक्तिगत नै भेटेर हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा उभिन आग्रह समेत गरेका छन् । ‘हालसम्म करिव २ सय सभासद् प्रस्टरुपमा देखिएका छन्’ हिन्दुराष्ट्र संरक्षण अभियानका प्रवक्ता तथा अधिबक्ता कुमार रेग्मीले भने ‘ हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा करिव साढे ३ सय सभासद् उभिने हामीले आंकलन गरेका छौ ।’
त्यसैगरी एमाले सभासद्हरुकाबीचमा पनि छलफल चलिरहेको छ । गोप्यरुपमा एमाले सभासद्हरुले कांग्रेस नेता खड्का र कोइरालासँग भेट गरिहेका छन् । एमाओवादीका केही सभासद् पनि हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको ह्वपलाई नै उलंघन गर्ने तहमासम्म पुगेका छन् ।
त्यसैगरी हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा सभासद्हरुलाई प्रभाव पार्न कालिबावादेखि स्वामी कमयनयनाचार्यसम्म सक्रिय भएका छन् । उनीहरुले एक एक गरी सभासद्हरुलाई गोप्यरुपमा भेटिरहेका छन् । नेपाललाई बिश्वमाँझ हिन्दुराष्ट्रको पहिचान दिन आग्रह गरिरहेका छन् । देशभित्रका राजनीतिक शक्ति मात्र नभई भारतीय जनता पार्टीका केही नेता पनि नेपाल आएका छन् । उनीहरुले पनि सभासद्हरुसंग भेट गरिरहेका छन् ।
संकटमा शिर्ष नेता
दुर्गेश घले says:
सुभास नेम्बाङ्ग जस्तो गद्वार लिम्बुलाई सभामुख बनाउनु अन्तत: यो देशको दुर्भाग्य भयो ! लिम्बु र तामांग जाति त लगभग ईशाईल् किनिसक्यो ! यो जातिको आफ्नो इज्जत भन्ने नै नभएको एक मुर्ख जात रहिछ तर राजनीतिमा प्रचण्ड महामुर्ख रहिछ ईशाईको डलर कम्युनिष्टको झन्डामा पोको पारेर आफ्नै कार्यकर्तालाई वेवकुफ बनायो ! अर्को कुरा क्यास माओबादीमा वेबकुफ मात्रै लाग्दा रहेछन भन्ने प्रचण्डको हनुमान हेर्दा थाहा भयो ! प्रचण्ड डलर खाएर कराएको छ उसको हनुमान सोरैमा कराउँदै उफ्रन्छ !
राजामामा कुसुण्डाको शवमा छोरीले दागबत्ती दिइन्
निर्वाचनको कार्य योजना पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश
सामाजिक सञ्जालमा के कारण वढ्यो ओलीको पक्षमा जनमत ?